सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनमाथि सरकारको सोधपुछ - ePosttimes
Homeसमाचारसरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनमाथि सरकारको सोधपुछ
सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनमाथि सरकारको सोधपुछ
६ बैशाख २०७७, शनिबार १४:१७ समाचार, हाम्रो सरोकार 0
शनिबार मात्र एक संक्रमित निको भएर घर फर्किइन् भने एक संक्रमित उपचाररत छन् । कोरानाको आशंका पनि अधिकांश बिरामी त्यहीँ पुग्छन्, अस्पतालहरु पनि त्यहीँ रिफर गर्छन् ।
अरु अस्पतालभन्दा टेकुमा बढी चाप छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको खटाई पनि बढी छ । थोरै संख्यामा रहेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट (पीपीई), एन ९५ मास्क कम खपत होस् भनी २४ घण्टे ड्युटी गर्छन् । घर परिवार र समाजको दबाव र तनाव पनि छँदैछ ।
त्यसका बाबजुद टेकु अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोनाविरुद्ध अग्रप‌ंक्तिमा खटिएका छन् । त्यसरी खटिएकामध्ये एक डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई सरकारले भने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च यूनिटका संयोजकसमेत रहेका पुनलाई सञ्चार माध्यममा कोरोनाबारे व्यक्त धारणालाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उनलाई जगेडा राख्ने तयारी छ ।
मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की भने टेलिफोनबाट बोलाउन नआएपछि पत्र काट्नु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले आफ्नो विधि र प्रक्रियामा रहेर काम गर्न पनि नपाउने ? विज्ञको सल्लाह लिन पो बोलाएको हो कि ?’
डा. पुन भने केही दिनयता मन्त्रालयमा बोलाए पनि केका लागि हो भन्ने थाहा नपाएको बताउँछन् । ‘केही दिनयता अस्पतालको प्रशासनबाट मन्त्रालयमा कुरा गर्न बोलाएको छ भन्ने जानकारी आएको थियो तर जान पाएको छैन’, उनले भने ।
इपिडियमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी कोरोना भाइरसका विषयमा जनतालाई चिकित्सकले नै पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् ।
डा. मरासिनी महामारी, रोग, ओषधि जस्ता कुरामा जनताले डाक्टरकै भनाइमा विश्वास गर्ने बताउँछन् । मन्त्रालयले आफ्नो कमजोरी र असक्षमता लुकाउन कसैलाई बलीको बोको बनाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
320300cookie-checkसरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनमाथि सरकारको सोधपुछyes
न्युयोर्क सहरका झण्डै आधा कोरोना संक्रमित ४५ वर्षमुनिको संख्या अधिक १ नम्बर प्रदेश सरकारले कोरोना भइरस (कोभिड १९) विरुद्ध लडन पूर्ण तयारी गरिसकेको छ : मुख्यमन्त्री राई डा.सुनिल शर्माद्वारा प्रदेशकै सर्वाधिक रकम सहयोग : कोरोना राहत कोषमा ३० लाख प्रदान कोरोना टेस्टको रिपोर्ट नआउँदै आइसोलेसन वार्डबाट भागे दुईजना बाग्मती प्रदेशमा -यापिड टेष्टमा छ जनामा कोरोना संक्रमण पाइयाे आज देखि कृषि बजार खुल्यो, तरकारी खरीद बिक्रीको नयाँ तालिका सार्वजनिक उदयपुरमा स्थानीय युवाबाट मस्जिदका जमातीलाई कोरोना सरेको पुष्टि जन निर्मित वडाकार्यालयलाई दिर्घ लिम्बुको १ लाख ५० हजार सहयोग
अर्जुन बुढाथोकी नेतृत्वको राहत न्यूनीकरण उपसमिती विघटन